Myanmar: May Ny Tsena YadanarPon ao Mandalay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2017 18:35 GMT
Ao amin'ny zoron'ny lalana 32 sy 78 sy ny zaridaina malaza Manadlay MICT (tanàndehiben'ny solosaina), toeram-pivarotana lehibe mandeha an'habakabaka, Tsena Orange Super, toeram-pilalaovana Snookers sy ny toeram-pisakafoanana no misy ny tsena Yadanarpon ary tsena an'arivony no hita ao amin'izany tsena izany. Yandanarpon no tsena faharoa lehibe indrindra aorian'i Zaycho ary nisokatra tamin'ny taona 2000 sy nivoatra be. [#]
Sary tao amin'ny bilaogy Aung Chan Lin.
Nibilaogy momba ny herin'ny afo sy ny mpamonjy voina miraviravy tanana i komoethee.
Mbola miredareda ny afo hatramin'izao (8:00 hariva – 9:55 hariva) ary mijery am-pahakiviana ireo olona an'arivony sy ny tompon'ireo toeram-pivarotana. Vao nisokatra mihitsy ny tsena no nipoitra ny afo tamin'ny 8:00 maraina ary nilaza fa avy amin'ny herinaratra izany, natahotra ireo mpamono afo hiditra ao anatiny noho ny setroka ka lasa mitazana fotsiny ety ivelany.
Kaungkinko nandefa lahatsary misy ny afo tao amin'ny tsena Yadanarbon, Mandalay.
Niahiahy ireo mpitazana ny amin'ny tsy fisian'ny fepetra ara-piarovana ao amin'ny tsena lehibe tahaka izany ary nisalasala fa tsy misy ny fandrindrana voalamina raha sendra misy fahamaizana.
Araka ny tatitra tsy ofisialy, voalaza fa olona roa no namoy ny ainy nandritra ny fahamaizana.
“Raha kely indrindra dia 2 no maty ary mihevitra aho fa betsaka kokoa izany satria tsy ampy ny lalana fivoahana ary niezaka nihazakazaka nampiasa ny tohatra tery kely ny olona. Noho izany, mihevitra aho fa mety betsaka ny isan'ny maty ary maro ireo hijaly noho ny afo “hoy izy nanohy.
Nitsambikina avy eny amin'ny tranobe ny olona sasany, ny hafa voahitsaky ny olon-kafa teny am-pihazakazahana, hoy koa izy
Nanangona ireo vaovao momba ny fahamaizan'ny Mandalay ny bilaogy Reaper ary nitatitra koa fa nisy fahamaizana tao Yangon.
Tao an-tanàndehiben'i Myanmar, Yangon, nipoaka ny afo tao amin'ny fivarotana dite ao amin'ny faritra indostrialy Hlaingthayar tamin'ny Alatsinainy maraina ary niely manerana ny faritra manodidina.
Adiny roa ireo mpamonjy voina vao afaka namono ny afo, izay nandrava trano 200, maro amin'izy ireo no trano kely, hoy ny manam-pahefana.
Nilaza ny Mizzima News fa “olona efa ho 3.000 ao amin'ny faritra manodidina an'i Rangoon, Hlaing Tharyar no tsy manan-kialofana taorian'ny fahamaizana…vehivavy ny 1.260 ary lehilahy ny 1.709 avy amin'ny trano miisa 768 izay natelin'ny afo”.
Nalahelo noho ny afo tao Yangon sy Mandalay ny olona ary nandefa fiarahamiory tamin'ny alalan'ny lahatsoratra bilaogy.